ရန်ပိုင်| February 4, 2013 | Hits:3,999
3 | | ရန်ကုန် တိရိစ္ဆာန်ဥယျာဉ် (globaltravelmate.com)
Your email address will not be published. Required fields are marked *	Name * Email * Website Comment pps၁၂၃၄၅ February 4, 2013 - 7:16 pm	ကိုစိုးသိန်း ခင်ဗျားက ချမ်းသာ တယ်ဗျ။ (ခင်ဗျား ချမ်းသာတာ မနာလို၍ပြောခြင်းမဟုတ်ပါ)
Reply	minko February 4, 2013 - 7:58 pm	ဒီဝန်ကြီးဆိုတဲ့လူတွေ -ဘာမှ မသိဘူး-ငွေရဘို့ ဘဲသိတာ- မြေနေရာကို ဘယ်ကုမ္ပဏီ ရောင်းစားမလဲ မသိဘူး- ငွေရလို့ ကတော် ရွှေတိဂုံစေတီတော်မြတ်ကြီးတောင် ရောင်းချင် ရေားမည့်သူတွေ-
Reply	Mann February 5, 2013 - 11:20 am	အမှန်ဘဲဗျို့…..
Reply	thihamin February 5, 2013 - 10:00 am	အမှန်တကယ် ပြောင်းသင့်တာက မောင်မင်းသိန်းစိန်တို့ရဲ့ အစိုးရတဖွဲ့လုံးပါဘဲ။
Reply	khin February 5, 2013 - 11:02 am	ပန်းခြံမဖြစ်ပဲကွန်တိုတွေဖြစ်မယ်ထင်တယ်
Reply	Mann February 5, 2013 - 11:35 am	ဟိုဟာရောင်းစားမယ် ဒီဟာရောင်းစားမယ် ဆိုတာ ဘဘရွှေလက်ထပ်သင်ပေးခဲ့တာဘာ၊ သားသားတို့မှာအပြစ်မရှိပါဘူးဂျာ…..
Reply	ဗမာ February 5, 2013 - 2:56 pm	ဟုတ်ပါ့။ ဒီစိတ်ဓါတ်တွေအာဏာပိုင်တွေထဲမှာ အရိုးစွဲနေတာကြာလှပေါ့။
Reply	မြန်မာပြည်သား February 5, 2013 - 9:09 pm	ဆန်ရှင် ဖွင့်တုံး လုပ်ပိုင်ခွင့် ရတုံး ထပ်လုပ်ထားမှ ။
Reply	han han February 6, 2013 - 3:02 pm	Better keep zoo in Yangon, Because, near Shwedagon, Kandawgyi Park, Karaweik, Sule, local River port , Dala township and next Econimic zone. and Yangon city etc ,,.